Yakki Waraanaa Mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa Irratti .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYakki Waraanaa Mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa Irratti ..
Yakki Waraanaa Mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa Irratti Gaggeeffamaa Jiru Hawaasa Addunyaa Hundaan Balaaleffatamuu Qaba !
Walakkeessa Baatii Amajjii 2019 irraa eegalee Waraanni EPRDF kan maqaadhaaf Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) jedhamu Waraana Bilisummaa Oromoo fi Ummata Oromoo irratti lola gaggeessu gara haleellaa xayyaaraatti ol guddise. Akka kanaan Amajjii 12 fi 13 2019 Dhiha Oromiyaa Godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii keessatti haleellaa Xayyaaraa kan lubbuu Jaal Marroo (Kumsaa Dirribaa) balleessuuf akeekkate gaggeesseen lubbuu fi qabeenya Ummata nagaa (meesha-maleeyyii) irraan miidhaa guddaa geessise. Haleellaa sanaan manii/target isaa rukutuu dadhabuu oggaa hubate ammoo “Ani haleellaa xayyaaraa hin gaggeessine” jechuudhaan nyaara haaddatee kijiba adii lallabe.
Baatiilee lamaa ol dabraniif ammoo haala hedduu rifaasisaa fi gaddisiisaa taheen yakka waraanaa ol’aanaa Ummata Oromoo irratti gaggeessaa jira. Yakka suukanneessaa kanas Gaazii Sum’aawaa (Poisoning Gas) bosona Dhiha Oromiyaa bakkoota WBOn keessa sossohuu fi Ummatni nagaanis keessa jiraatu irratti xayyaarota waraanaatti gargaaramee firfirsuudhaan raaw’achaa jira. Hanga ammaatti haleellaa kanaan lubbuu bineensota bosonaa fi beeyladootaa hedduun kan bade oggaa tahu lafoota gariittis namootni dhibee fayyaa hin barataminiif saaxilamaniiru.
Waggoota 27f Ummatoota Impaayera Itoophiyaa maqaa dimokiraasii sobaatiin bulchiinsa afaan qawwee jalatti gidirsaa kan ture EPRDF keessaa maqaa haaromsaa fi jijjiiramaatiin gara aangootti kan dhufe bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed sirnicha gara dimokiraasiitti ceesisuuf waadaa seene faallessee yakka sadarkaa ol’aanaa kana raaw’achuun hedduu rifaasisaa, gaddisiisaa fi qaanfachiisaa dha. Yakki Waraanaa (War Crime) ol’aanaan bulchiinsa Dr. Abiy Ahmediin Ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun Hawaasa Addunyaa biratti beekamee balaaleffatamuu fi hatattamaan dhaabsifamuu qaba. Tahuu baannaan balaa haala kanaan wal qabatee dhufuuf deemu hundumaaf sadarkaa duraatti kan itti gaafatamu bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed fi Dhaaba isaanii ODP/EPRDF tahuu cimsinee hubachiisna.
Mootummootni fi hawaasni Addunyaa kanneen haqaa fi bilisummaa Ummatootaa, akkasumas, dimokiraasii dhugaatti amananii fi nagaa jaallatan hundi, Miidiyaaleen, Dhaabbattootni mirga dhala namaa … kkf. karaa isaaniif danda’ame hundaan qorannoo mataa isaanii gaggeessuudhaan dhugaa kana akka mirkaneeffatanis waamicha goona.
Maayyii irratti Ummatni keenya Bahaa-Dhihatti, Kaabaa-Kibbatti, akkasumas, biyya keessaa fi alaan harka wal qabatee miidhaa suukanneessaa kana of irraa dhaabsisuuf akka socho’u waamicha qabsoo dhiheessina. Bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed kan afaaniin humna jijjiiramaa fi haaromsaa ofiin jechuu bira kutee akka Mootummaa Oromootti Ummata keenyatti of himaa yakka warri isa dura turan illee hin dalagin Oromoo irratti dalagaa jiru kana irratti dhiibbaa barbaachisu hunda gochuun karaatti deebisuu fi yoo hin deebine qabsoodhaan maqsuun dirqama seenaa ti jennee amanna. Kana keessatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo hundaa olitti gahee isaa akka bahatu hin shakkinu !
Ajaja Ol’aanaa Waraanaa WBO
Waxabajjii 01, 2019